Apple Inoburitsa Beta 4 yewatchOS 3.2.3 yeVagadziri | Ndinobva mac
Apple inoburitsa beta 4 yewatchOS 3.2.3 yevagadziri
Kufanana neMuvhuro wega wega, isu tine shanduro nyowani dzeanoshanda masisitimu ayo Apple yaanoda kuisa pamusika munguva pfupi. Panguva ino ivo vapa iro girini mwenje kune yechina beta yeWOSOS 3.2.3, iyo inoshanda system yeApple Watch.
Pasina mubvunzo Apple iri kupa pamberi peiyi vhezheni nyowani nemhando dzakasiyana-siyana dziri kuedzwa kubvira yetatu beta, kunyangwe sekuziva kwazvinozivikanwa, aya mabhatas emazuva ano ari kutarisa kugadzirisa zvikanganiso. Munguva pfupi tichaona kana iyi beta roe yakasiyana uye mairi vagadziri vanowana chikanganiso pachikamu cheApple icho chinotizivisa chimwe chinhu nezve inotevera Apple Watch.
Apple nhasi yagadzira iyo nyowani beta 4 yewatchOS 3.2.3 kuwanikwa kune vanogadzira ine chitupa nhamba 14V5751a. Zvese izvi beta uye yapfuura zvakanangana nekugadzirisa zvebug uye kugadzirisa mashandiro uye zvinongowanikwa kune vakanyoresa vanogadzira.
Sezvaunoziva, Apple yanga ichimhanya yeruzhinji beta chirongwa cheIOS uye macOS kwenguva yakareba, asi mune mamiriro eOSOS uye maTVOS masisitimu zvinongogoneka kuve neaya mabetas kana iwe uri mugadziri.
Sezvo rumwe ruzivo ruchizivikanwa pamusoro penyaya dzeiyi yazvino beta yakatangwa, isu tinokuudza iwe muzvinyorwa zvitsva. Nguva shoma yasara kuti Apple iise pamusika iPhone nyowani neApple Watch Series 3 yakatakurwa nenhau, asi ikozvino chinhu chega chatinogona kuita kutenga Apple Watch Series 1 kana Series 2 uye ramba uchitarisira kwewachi nyowani inoenderera ichifadza Apple mafeni.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Apple inoburitsa beta 4 yewatchOS 3.2.3 yevagadziri
Maitiro ekuronga Night Shift paMacs kuti iite otomatiki
Apple inoburitsa beta 2 yeTVOS 11 yevagadziri